डेन्जर जोनबाट सफल अवतरण गर्न सफल सिन्धु एमाले
२०७८ भाद्र ११, शुक्रबार २१:११
सिन्धुपाल्चोक । नेकपा एमाले आन्तरिक संकटको ‘ डेन्जर जोन ‘ मा प्रबेश गरेर पनि फर्क्यो । तत्कालको हिसावमा करीव २० % अगुवा कार्यकर्ता गुमायो । बाँकी नेतृत्व र जनआधारले आउदो निर्वाचनसम्ममा साँवा मात्र हैन ब्याज समेत असुल गर्ने तयारीमा छ एमाले । यसको सकरात्मक सन्देश प्रवाह माधव – झलनाथ समुहको कब्जामा रहेको भनिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाटै भएको छ ।
आजै मात्र सिन्धुपाल्चोकको एमालेको संस्थापन पक्ष र बिद्रोही पक्षको छुट्टा छुट्टै बैठक काठमाण्डौमा बस्यो । लामो समयसम्म माधव – झलनाथ गुटमा कृयाशील स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु सहित अगुवा भनिएका पार्टीका स्थानीय नेताहरुको उपस्थिति रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
उक्त समुहको बैठक कोटेश्वर स्थित अरनिको ईन्भेष्टमेण्ट प्रा. लि. को कार्यलयमा भएको थियो भने संस्थापन पक्षको बैठक कौशलटार बैक्वट नजिक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । उक्त्त संस्थापन पक्षको बैठकमा जिल्लाका बाह्रवटै पालिका स्तरको पार्टी कमिटीका प्रमुखहरु रहेको बुझिएको छ ।
बिद्रोही खेमाका एमालेको भेलामा उक्त समुहको नेतृत्व प्रति आलोचना गर्दै आफुहरुलाई गलत मुद्दामा फसाईएको, जनतामा के भन्न जाने भन्ने अन्यौल सृजना भएको सहभागी मध्य एकले बताए । हिजो माधव झलनाथ खेमामा उभिए पनि अब नयाँ परिस्थिति सृजना भएकोले बिभाजनको पक्षमा जान नहुने भन्दै अधिकांस सहभागीहरुले धारणा ब्यक्त गरेका थिए । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर आउदो निर्वाचनमा पहिलो शक्तिमा उभिने गरि कृयशील हुन भेलाका प्रमुख अतिथि तथा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोराले निर्देशन दिएका थिए ।
उता संस्थापन पक्षले पार्टीको आन्तरिक एकता गर्दा दुबै खेमामा संगठित नेताहरु सबैले जितेको अनुभुति हुने गरि कमिटी पुनब्यबस्थापन गर्न केन्द्रलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । पार्टी आन्तरिक संकटमा गुज्रेको समयमा संगठन बचाउन दिलो ज्यानले कृयाशील हुने कार्यकर्ताको उचित मुल्याङ्कन हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । रचनात्मक ढंगले दश बुदे सहमति कार्र्यान्वयन गर्ने हो, निरपेक्षढंगले हैन । आन्तरिक सहमति कायम गरेर मात्र जिल्लाको बैठक आयोजना हुनु पर्ने कुरामा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
पार्टीको आन्तरिक जीवन स्वस्थ नभई कम्युनिष्ट आन्दोलनले गति लिन नसक्ने भएकोले झिनामसिना मुद्वामा नअल्झिन र सबैको उचित कदर र ब्याबस्थापन गरेरै पार्टीले घोषित लक्ष्य पुरा गर्ने भएकोले समुन्द्रको छाल झै गतिसिल भैरहन सहभागीलाई बैठकका प्रमुख अतिथी तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य सरेश नेपालले आग्रह गर्नु भएको सहभागी एक कार्यकर्ताले जानकारी दिए ।गोधुलि अन्लाईन बाट